रमाइलो कि नरमाइलो ? - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः असार ३२, २०७५ - साप्ताहिक
रमाइलो कि नरमाइलो ?
अघिल्लो साता काठमाडौंमा एउटा रमाइलो कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सञ्चारकर्मी उत्सव रसाइलीद्वारा सञ्चालित रमाइलो छ डटकम तथा यूट्युब च्यानलको पहिलो वार्षिकोत्सवमा चलचित्र क्षेत्रका लोकप्रिय अनुहारको बाक्लो उपस्थिति देखियो । विश्वकप फुटबलको चटारोबीच कलाकारहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागि देखिन्थे ।
आयोजकले सहभागि कलाकारलाई ‘नीलो’ रंगको पहिरनमा आउन आग्रह गरेका होला अधिकांश अभिनेत्री नीलै रंगका पहिरनमा प्रस्तुत भए । लोकप्रिय अभिनेत्रीहरूको बाक्लो उपस्थितिका कारण त्यहाँ फोटो पत्रकारहरू अलि बढि नै व्यस्त थिए ।
अभिनेत्रीहरू पनि तस्बिरका लागि थरि–थरिका पोज दिन पछि परेनन् । समारोह प्रारम्भ हुनै लाग्दा दर्शक दीर्घामा एउटा नरमाइलो दृश्य पनि देखियो । अभिनेत्रीहरू नीता ढुंगाना, रेखा थापा, पूजा शर्मा आदि लस्करै बसेका थिए ।
पछाडिबाट अभिनेत्री सुष्मा कार्की सबैलाई अभिवादन गर्दै अघि बढिन् । पूजा शर्माको ठीक पछिल्तिर आएपछि उनी अचानक पछि हटिन् । अभिनेत्री रेखा थापाले सुष्माको हात समाएर पूजातर्फ नसारेकी पनि होइनन्, तर सुष्माले जबर्जस्ती आफ्नो हात फुत्काइन् ।
उक्त दृश्य नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकारहरूले त्यसको भिडियो समेत खिच्न भ्याए । निर्देशक सुदर्शन थापाका कारण सुष्मा र पूजाबीच पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना भएको गाइँगुइँसमेत सुनियो । खास कारण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।